Air Serbia sy ny mpanatanteraka seranam-piaramanidina Soisa / Lufthansa: Mitarika zotram-piaramanidina amin'ny 2021
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Serbia sy ny mpanatanteraka seranam-piaramanidina Soisa / Lufthansa: Mitarika zotram-piaramanidina amin'ny 2021
mitarika zotram-piaramanidina amin'ny 2021
Rehefa tanterahina eran'izao tontolo izao ny vaksinin'ny COVID-19, dia manakaiky ny faravodilanitra ny fanantenana fiverenan'ny dia sy fizahan-tany. Ny dingana voalohany hanombohana ny dia voalohany dia amin'ny alàlan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka.
Ny tompon'andraikitra ambony amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia mifanakalo hevitra momba ny satan'ny fiaramanidina mandritra ny areti-mandringana COVID-19 ankehitriny.
Inona ireo vinavinan'ny taona 2021 ary marina ve ireo?
Afaka mahavita miaina amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina mihena ve ny zotram-piaramanidina?
Lehiben'ny tompon'andraikitra ara-barotra an'ny Air Serbia Jiri Marek ary ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Swiss Tamur Goudarzi Pour ary ny filoha lefitra Senior Channel Channel ao amin'ny Lufthansa Group dia niresaka tamin'ny Executive Executive Commercial Aviation tao amin'ny Aviation Week Network Jens Flottau, mpandinika mpitsikera ny CAPA Live izay nifantoka tamin'ny fitarihana ny zotram-piaramanidina amin'ny 2021. Ity ny fandikana ny fotoana:
Te-hanomboka amin'ny fanontaniana iray momba ny toe-piainana misy ankehitriny sy ny famerana ny fivezivezena vaovao any Eropa aho, ary ny fiantraikan'izy ireo amin'ny Suisse sy Air Serbia. Heveriko fa efa voatery nanapaka lavitra kokoa noho ny noeritreretinao tao anatin'ny andro vitsivitsy ianao, sa tsy izany? Jiri, te-hanomboka ianao?
Eny tokoa. Misaotra Salama daholo. Heveriko fa manana fomba fijery somary hafa isika satria satria efa ivelan'ny UE isika, tamin'ny ankapobeny tamin'ny taon-dasa, dia efa nisy fiantraikany be tamin'ireny fameperana ireny, izay ahafahan'ireo mpiara-miasa aminay any Eropa mbola afaka manatanteraka ny fangatahana. ao anatin'ny faritr'i Schengen. Na izany aza, ohatra, ny olom-pirenena Serba dia tsy mahazo miditra any Eropa efa hatramin'ny Jolay tamin'ny taon-dasa.
Ka noho izany dia tsy maintsy nanitsy nandritra ny taona lasa isika tamin'ny zavatra iray izay nantsoinay hoe tena dia ilaina tokoa. Amin'ny ankapobeny, ny olona izay tsy maintsy mandeha, dia handeha izy ireo, na ny olona mazàna manana zom-pirenena roa, fahazoan-dàlana hipetraka amin'ny roa [tsy henoina 00:01:59] sy ny sisa. Ka ny alakamisy lasa teo dia nifehy ny vinavina vaovao i Euro, izay mbola pessimist kokoa ihany. Somary nahagaga ihany izany, saingy tsy mila fanitsiana be loatra amin'ny lafiny misy antsika izy io satria efa teo amin'io fahaiza-manao voafetra io isika. Miasa eo amin'ny 38% amin'ny fahafaha-manao 2019 izahay izao. Somary ambonimbony kokoa eo ho eo ny UE, izay voamarina tamin'ny volana Janoary, saingy mazava ho azy fa hataonay ny fanatsarana, saingy tsy tena haingana, satria tsy misy fiovana lehibe eo amin'ny famerana ny dia lavitra raha oharina amintsika nandritra ny taona lasa.
Tamur, amin'ny Suisse dia nihena fotsiny ianao tany Geneva sy tany Zurich, sa tsy izany?
Eny, mazava ho azy fa nihetsika tamin'ny fivoaran'ny areti-mandringana tato ho ato izahay ary nampihena ny fahafaha-manaontsika amin'ny maha mpitatitra eropeana azy miaraka amina maneran-tany. Mazava ho azy fa nisy fiantraikany tamin'ny fitondrana ara-dalàna rehetra eropeana, mifehy ny lalàna manerantany. Noho izany, tsy maintsy nihetsika haingana be sy niovaova tanteraka isika, araka ny fantatsika hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana. Ary vao nahenanay ny fahafahanay ho eo amin'ny 10% amin'ny sidina, manodidina ny 20% ny ASK momba izay nananantsika tamin'ny taona 2019 ho an'ny volana Febroary izao.
Ie. Jiri, nilaza ianao fa tsy niova firy, fa Tamur, avy taiza no niavian'izany? Talohan'ity fanapahana farany ity, taiza ianao taloha?
Tokony ho avo roa heny ny fahaizanay, fa tsarovy ny ankamaroan'ny mpitatitra eoropeana dia nanana tampon'isa krismasy kely izay naharitra hatramin'ny 10 andro voalohany tamin'ny volana janoary. Ary taorian'izany dia nidina ny fangatahana. Fanampin'izany, ny lalàna fanampiny sy ny fiovana amin'ny areti-mandringana dia azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpitatitra, toa antsika koa, dia tsy nanitsy ny volana febroary na ny faran'ny volana janoary hatramin'ny febroary. Ary azoko antoka fa amin'ny volana martsa dia hisy fanovana hafa koa.
Ie. Ka aleo aloha hibanjina kely. Akaiky ny fahavaratra, tsy vita haingana araka ny nantenain'ny rehetra ny vaksiny. Ahoana no hiomananao amin'izany? Manomana scenario maromaro ve ianao avy eo manapa-kevitra amin'ny fotoana tokony harahina, sa manohy fotsiny ny dianao? Jiri, inona ny fizotrany any Serbia?
Jereo fa tena hafa tokoa ny fizotrany noho ny teo aloha, araka ny efa fantatsika. Ary hiteny aho amin'ny ankapobeny fa ny fantatsika tsara dia ny hiova ny zavatra satria io ihany no omena zato isan-jato. Ary heveriko fa ny tena olana, ny hitantsika dia izao fa mbola misy karazana vina ivelany tsy miankina, ny Latta, ny fanaraha-maso ny Birao, amin'izao fotoana izao dia mbola midina daholo ireo vinavinan'ireo. Ny fanontaniana dia inona ny momba azy ireo? Efa hitantsika tamin'ny faran'ny taona lasa, na izany aza, ny vinavina farany hatramin'ny alakamisy, mbola mitohy io. Noho izany, ny fanontaniana dia aleo ve hoe rahoviana no manomboka hiakatra izy io.
Aleoko ny miteny fa, eny, miasa miaraka amin'ireto scenario ireto izahay mandritra ny fotoana fohy ihany koa ary manamboatra azy ireo hatrany izahay mba hifanaraka amin'ireo loharano ivelany. Na izany aza, toy ny famandrihana rehetra ary ny fangatahana dia matetika mitranga ao anatin'ny 10 andro mialoha ny hiaingany. Noho izany, manakiana kokoa noho ny fizotrany, izay ianao ihany koa, izay notondroin'ny mpiara-miasa amiko, ny fomba fitantanana ny tamba-jotra izao amin'ny fomba haingana sy malefaka mba hanitsiana ny fiovaovan'ny fangatahana satria miova ny lalàna amin'ny fotoana fohy. , ary misy fiatraikany lehibe amin'ny fangatahana.
Ny zavatra hitantsika matetika dia raha tsy misy fetra, dia andao zato zato isan-jato, raha toa ka mametraka fameperana fitsangatsanganana izay mametra ny zom-pirenena sasany handehanana ianao, mazàna ianao mahazo, andao lazaina eo anelanelan'ny 20, 40% ny fihenan'ny Ary raha mampiditra PCR ianao dia 20 hafa ary tsy misy akony firy noho ny fampidiranao quarantine. Raha mampiditra quarantine ianao, ary indrindra ny fahitanay ny Serbia sy Suisse, ny quarantine dia naka 80% ny fangatahana avy hatrany isan'andro iray andro. Ka izany no izy, ary raha misy firenena toa ny PCR miampy quarantine dia toy ny fandrarana ny tolona izany.
Ka noho izany dia heveriko fa amin'izao fotoana izao, izay hitantsika mialoha ho an'ny Q1, dia hiasa bebe kokoa manodidina ireo 35, 38% amin'ny fahaiza-manao isika. Ary io no tena tantananay isan'andro. Ary manana scenario roa mandritra ny fahavaratra isika, saingy mety hiova be ireo arakaraka ny fandehan'ny tsena, ny fetran'ny fetra, ary raha toa ka hisy fetra mifandrindra ihany amin'ny farany, satria ala be izao ny mahatakatra hoe firenena iza, inona no mametra anao manana. Ary hiezaka ny hanitsy mazava tsara ny tenantsika amin'izany isika, izay efa nahombiazantsika hatreto.
Ary inona ny scenario amin'ny fahavaratra? Milaza ianao fa 38 taona izao.
Ny tranga fahavaratra amin'izao fotoana izao, eo anelanelan'ny scenario Eurocontrol roa farany izahay, satria na dia nandritra ny taona 2020 aza dia niasa mihoatra ny salanisan'ny EU rehetra izahay miaraka amina KPI avo kokoa tratra eo amin'ny lafin'ny lalana. Noho izany, izahay amin'izao fotoana izao dia maminany eo anelanelan'ireo scenario ireo ka hiteny aho hoe Q2 dia manodidina ny 40, 45% amin'ny ambaratonga 2019 izahay.
Okay. Ary i Tamur, miaraka amin'i Soisa, inona ireo scenario hitanao amin'izao fotoana izao?
Tsy misy sensor fampitandremana amin'ny rivotra maloto: FAA sy EASA tsy miraharaha izany?